Kulanka Real Madrid iyo Las Palmas ee horyaalka La Liga | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Kulanka Real Madrid iyo Las Palmas ee horyaalka La Liga
Kulanka Real Madrid iyo Las Palmas ee horyaalka La Liga
Muqdisho – Real Madrid ayaa dib ugu soo laabtay garoomada kulanka afaraad ee meel bannaan oo ka mid ah 11 maalmood oo ay wajahayaan Las Palmas ee Primera Division ee habeenkan arbacada ah .
Zinedine Zidane ayaa Arbacadii la soo dhaafay 2-0 ku garaacay kooxda Espanyol ee Santiago Bernabeu 18 February, ka hor inta uusan guul darro 2-1 ah ka qaadan Valencia ka dibna 3-2 kaga badisay Villarreal axadii ka dibmarkii ay ka soo kabatay labo gool oo lagaga Hor maraya si ay seddexda dhibcood ee Estadio de la Ceramica kaga soo qaataan.
Los Blancos ayaa hal dhibic ka sareeysa Barcelona miiska kala Horaynta balse weli kulan ayaa u baaqi ah dib markii ay kulan ay marti u ahaayen Celta Vigo Bilowgii February waxaa dib loo dhigay sababo la xiriira dhaawac duufaan ah oo uu garoonka kooxda Galician ee Balaidos gaar siiyay.
Wararka Kooxahan ka Cusub
Raphael Varane ayaa maqnaanayaa muddo isbuucyo ah ka dib markii dhaawac uu kula dhacay Mestalla Stadium Arbacadii la soo dhaafay, halka Danilo uusan weli diyaar u ahayn inuu ku soo laabto Madrid maanta, mana ciyaarayo kulanka Blaugrana ay la qaadanayso Las Palmas.
Gareth Bale ayuu soo gaaray dhaawac jug ah kulankii ay 3-2 kaga badiyeen Villarreal Axadii, laakiin xidiga reer Wales ayaa urajaynaya u tartamida inuu ku soo bilowdo tan iyo markii labaad uu ka soo kabsaday dhaawac canqowga uu la maqnaa muddo ku dhow saddex bilood.
Tababare Zinedine Zidane ayaan lahayn ciyaaryahan ganaax ku maqan kulanka Primera Division ee gurigooda ku qaabilayaan Las Palmas habeenkan Arbacada ah.
Las Palmas ayaa ku bilaabatay kubad fiican xilli ciyaareedkaan La Liga, laakiin Canary Islanders ayaa laga badiyay afartii kulan ee ugu danbeysay tan iyomarkii uu la soo saxiixdaa Ciyaaryahankii hore ee Real Madrid Jese iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee hore ee Barcelona Alen Halilovic January.
Angel Montoro, Michel Macedo iyo Javi Castellano ayaa iyagana dhaawac ah oo aan ka qeyb qaadan safarrka Santiago Bernab, halka Marko Livaja uu shaki ku jiro.
Real Madrid ayaa weli looga badinin Santiago Bernabeu kulan ka dhanka ah Las Palmas ee La Liga (waxa ay badisay 28, iyo afar barbaro).
Las Palmas ‘Guushii ugu danbeysay ee La Liga ay la ciyaarayaan Real Madrid ayaa ahaa 2001-02 – 4-2 guul ah ay gurigooda kaga gaareen 15 sano ka dib guul kama qaadan Los Blancos.
Real Madrid ayaa dhalisay Goolaly 44 kulan ee ugu danbeysay tartamada oo dhan, waxa ay barbareeyasy baxsad ugu fiican ee kooxda La Liga ka weligeed samaysa(Barcelona 1944).
Kulan uu kahor tagay Villarreal, Cristiano Ronaldo ayaa noqday ciyaaryahankii Liga ee rigoore ugu dhaliyay (57), waxa uu dhaafay Hugo Sanchez (56).
Kulanka: Real Madrid v Las Palmas.
Garoonka: Santiago Bernabeu.
Waqtiga: 11:30pm Saacada Geeska Afrika.
Previous: Kulanka ku celiska ah oo ay gurigeeda ku ciyaari doonto Man City
Next: Kulanka lawada sugayo ee Barcelona iyo Sporting Gijon